မိခင် တစ်ယောက်မှ ရင်ဖွင့်စာ ~ Nge Naing
Thursday, May 19, 2011 ဒီရေ 47 comments
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တိုးတက်စေလိုသူ says:
May 19, 2011 at 6:28 PM Reply
အခု ပို့စ် (မိခင်တယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ) မှာ တင်ပြထားတဲ့ မွေးစကလေးက ဆရာဝန်တွေရဲ့ ပေါ့ဆမှု၊ တာဝန်မယူမှုကြောင့် ၂၇-၁ဝ-၂ဝဝ၉ ရက်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် လို မသေသင့်ပဲ သေသွားရတာပါ။
ခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် တုန်းက ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လွန်းမက ဝေဖန်ကြတော့မှ နောက်ဆုံး မလွဲမရှောင်သာတဲ့အဆုံးမှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာကြည်စိုး ကို ဆမ ၅ နှစ် ပိတ်လိုက်တာပါ။
အခုလည်း (မိခင်တယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ) ပို့စ်ကို ဖတ်မိတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေက အယ်ဒီတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးရှင်တွေဆီကို ဒီပို့စ်ကို ရောက်အောင် အီးမေးလ်နဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီး ပို့ပေးကြပါ။
ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေက အယ်ဒီတာတွေနဲ့ဆောင်းပါးရှင်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ် မရှိသူတွေ အနေနဲ့လည်း (မိခင်တယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ) ပို့စ်ကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ အသိတွေ အားလုံးဆီကို ဖောဝပ် အီးမေးလ်နဲ့ ပို့ပေးကြပါ။
ပြီးတော့ ကာယကံရှင် မိသားစုအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်း ကို ဒီအကြောင်း အပြည့်အစုံကို စာတင်သင့်ပါတယ်။
May 19, 2011 at 6:30 PM Reply
May 19, 2011 at 8:26 PM Reply
(((( ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအသစ် ဆိုတဲ့ ဖေသက်ခင် က စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုတော်ရိ စစ်စစ်ပါ.. ဘယ်တုန်းကမှ ပြည်သူ့နစ်နာချက်တွေကို အလေးမထားဘဲ တသက်လုံး မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက် ဘဲ လုပ်လာတာပါ.. ဖေသက်ခင်က ကျောင်းသားဘဝကတဲက စပြီး တသက်လုံး စစ်အစိုးရလူကြီး တွေရဲ့ သားသမီးတွေနဲ့ ဘဲ ပေါင်းပြီး အခုလို ဝန်ကြီးရာထူး ရလာတာပါ.. ))))
လို့ ကိုနစ်နေမန်း တင်ပြထားတာကို သတိရကြ စေလိုပါတယ်..
စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုတော်ရိ ဖေသက်ခင်ဆီကို စာတင်ရင် ဖေသက်ခင်က ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ချောင်ထိုးထားလိုက်မှာပေါ့..
အဲဒီတော့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ တာဝန်မဲ့မှုကြောင့် အသက်မသေသင့်ဘဲ သေသွားရတဲ့ ကလေးရဲ့ မိခင်နဲ့ ကူညီသူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဖေသက်ခင်ဆီကို စာရေးတိုင်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ဖက်က တာဝန်ကျေပြီ လို့ သဘောမထားဘဲ ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဒီအကြောင်း ပါလာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လူတွေဆီကို ဆက်သွယ်ပြီး ဒီအကြောင်းကို ပို့ ပေးဖို့ ဆိုတာကို အဓိက အာရုံစိုက်ပြီး ဖိဖိစီးစီး လုပ်ကြစေလိုပါတယ်..
ပြည်တွင်းဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဒီအကြောင်း ပါလာပြီး ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံလာမှ အရှောင်အတိမ်း လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အနေအထားမျိုး ရောက်လာမှသာ ဖေသက်ခင်လို စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုတော်ရိ ဝန်ကြီး ဖေသက်ခင်က နည်းနည်း လှုပ်လာမှာပါ..
ကိုနစ်နေမန်း တင်ပြထားတဲ့ ဖေသက်ခင် ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုတော်ရိ စစ်စစ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးသစ်ရဲ့ သရုပ်မှန် (မူရင်း) ကို ပြည်သူတွေ သိနိုင်အောင် အောက်မှာ ထပ်ထင်ပေးပါမယ်..
ဖေသက်ခင်လည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲဘဲ says:
May 19, 2011 at 8:29 PM Reply
ကိုနစ်နေမန်း တင်ပြထားတဲ့ ဖေသက်ခင် ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ အလိုတော်ရိ စစ်စစ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးသစ်ရဲ့ သရုပ်မှန် (မူရင်း) ကို ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်..
May 19, 2011 at 11:08 PM Reply
ကိုဒီရေပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Health Care Code of Conduct, Patients' rights, Professional practice and responsibility စတာတွေ အများကြီး ဆွေးနွေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် အစ်မလုံးဝ မအားသေးလို့ နောက်မှ ဆွေးနွေးတော့မယ်။
May 20, 2011 at 1:47 AM Reply
မယုံပါဘူး၊ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေး မကျေနပ်ချက်ဖြင့် ရေးတာ ဖြစ်နိုင်သလို ပို့စ်တွေများများ ရေးတင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ရေးတင်နေတာလို့ထင်ပါတယ်။ မိမိသားသမီးကို အခြားလူတယောက်က အဲလိုတွေ လုပ်နေရင် ဘယ်သူမှ သီးခံမှာ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်က နားမလည်လို့ ငှားထားတဲ့ နပ်စ်မ ဖြစ်နေလို့ ပါဆိုတဲ့ ဆင်ခြေလောက်နဲ့တော့ မလုံလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကိုယ် မကြိုက်ရင် နောက်ထပ် နပ်စ်မ တယောက်ကို ပြောင်းငှားလို့ ရနိုင်ပါရဲ့ နဲ့ ဘာလို့ မပြောင်းတာလည်း။ အဲဒါက မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်
May 20, 2011 at 5:09 AM Reply
မမှားသောရှေ.နေ မသေသောဆေးသမား ဆိုတဲ.စကားကို ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်
မြည်သို.ဆိုစေ ပြည်တွင်းမှာနေပြီး ကိုယ်.နိုင်ငံသားပေါင်းများစွာကို ကုနေရင်း မတော်တဆသေရတဲ.ဆေးသမားတွေက ပြည်ပမှာနေပြီးကိုယ်.နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ. သူတွေကို ဆးရုံတွေမှာ ကျွန်တပိုင်းလို ပြုစုစောင်.ရှောက်ပေးနေရသူတွေထက်တော. အများကြီးသာတာသေချာပါတယ်
Is this the correct name KBC hospital ? KBC is stand for karenbibalcollage and how did u manage to get that certificate of that nurse i mean we only use our certificate only for apply job right and there is no hospital at that location the nearest one IS THRISANDA at Lanthit street for i was living in Insein i know all the place, Any way sorry for u lose(if true) .GOD bless u
May 20, 2011 at 8:53 PM Reply
I feel so sorry for the mother of that baby.
I think it was misunderstanding each other
KBC clinic is just medical care for poor people has not enough money to go to hospital.They do not take money from patients. So the doctor or specialist do not get any money from there ,just for help .They will not be present all the time in clinic .I think that why they need to ask by phone.
She hire that nurse was not real nurse just she had nurseaid training forafew month(according to the certificate)she can not understand serious
May 22, 2011 at 4:40 AM Reply
ကျနော်ပြောချင်ပါတယ် ဒီဆောင်းပါးနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းနဲ့ပဲ အဖြေရှာရမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို အဟုတ်ကြီး ထင်နေတာကို သတိပေးချင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ဖို့က နအဖပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်တာနဲ့ စစ်ကြီးက ပြီးသွားမယ်လို့ လွယ်လွယ်လေးပဲ ပြောလိုက်တာပါ။ နအဖလဲ ငကျဉ်းတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တာ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဆွေးနွေးပွဲအားလုံး ပျက်ခဲ့တာချည်းပါပဲ။ အဲဒါ ဘယ်သူ့ အပြစ်လဲ?
ငကျဉ်း တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က မှန်ကန်သင့်လျှော်တဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်မှ နအဖက သဘောတူညီပေးလို့ ရမှာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အတ္တကြီးပြီး လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းနေတဲ့သူတွေပါ။ နောက်ပြီး ဗမာကို လူမျိုးရေး မုန်းတီးနေတဲ့ သူတွေလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုတွေကတော့ ထုံစံအတိုင်းပဲ ဆွေးနွေးပွဲပျက်တာကို နအဖအပေါ်မှာပဲ အပြစ်တင်ကြပါတယ်။ ဒီမိုတွေလဲ သူတို့နဲ့ ဘလော့ပေါ်မှာ ဆွေးနွေးဖူးတာပဲ။ သူတို့ဟာ ညှိနှိုင်းလို့မရပဲ တယူသန်တွေဆိုတာ မြင်တွေ့နေရတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်က ငကျဉ်းတွေကို ညှိလို့မရလို့ လက်လျှော့ထားရပြီး . . . ဘာလို့ နအဖကိုပဲ တဖက်သတ် အပြစ်တင်နေတာလဲဗျာ?
စဉ်းစားကြည့်နော် . . . ဆွေးနွေးလို့ မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားတဲ့ အခါကြတော့ လက်နက်ကိုင်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကို ဆက်လုပ်ကြတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ သဘောတူညီမှုမရရင် ငြိမ်းချမ်းစွာပဲ ဆန့်ကျင် လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် . . သဘောတူညီမှုမရတဲ့အခါမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားဖို့ မစဉ်းစားကြပဲ လက်နက်ကိုင် ဆူပူကြတဲ့ ဒင်းတို့ကိုပဲ အပြစ်တင်ရပါမယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ သမိုင်းတရားခံဟာ တိုင်းရင်းသား ငကျဉ်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြပါ။ စစ်သွေးကြွနေတဲ့ ငကျဉ်းတွေရဲ့ စကားကို မျက်ကန်းမယုံကြဖို့ သတိပေးပါရစေ။ တိုင်းပြည် ပြဿနာဖြစ်တိုင်း နအဖနဲ့ ဗမာတွေကိုပဲ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်ညှိးထိုး အပြစ်တင်နေတဲ့ သောက်ချိုးကိုလဲ ပြင်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(p.s. ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပါယ်ပေါ်နေလို့ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗမာမဟုတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေလို့ပဲ အဓိကသုံးခဲ့တာပါ။ အခုတော့ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့စကားကို သုံးထားပါတယ်။ ထို့အတူပဲ. . . ဗမာကို မမုန်းပဲ ပြည်ထောင်စု စိတ်ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလဲ ကျုပ်ရဲ့ စကားကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အနာတရဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။)
May 22, 2011 at 5:04 AM Reply
Comment တွေကို Moderation ခံရတဲ.ဘဝကို ပြန်ရောက်သွားပြန်ပြီလား..
Re : ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်
Your words are speaking for your mind!
What you say "ငကျဉ်း တိုင်းရင်းသား", its obvious that you are thinking just like many 'maha minded militant burmese'and army high ranking officials.
What you want to say is "come and knee to us and we may forgive you" sort of one-sided and command like conversation.
'ဗမာကို မမုန်းပဲ ပြည်ထောင်စု စိတ်ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလဲ ကျုပ်ရဲ့ စကားကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အနာတရဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်'? Thank you very much. You knockamonk's head and said sorry.
You said 'စဉ်းစားကြည့်နော်'.
Of course there's no idiot murking around here. Everyone know how to think.
You used'ဆွေးနွေးလို့ မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားတဲ့ အခါကြတော့' phrase.
Can you point out any meaningful and transperant negotiation from burmese officials? And do not think we are mindless zombies who know nothing. Do not expect others to listen your words with their closed eyes.
If you want to provoke others, then go somewhere like kyee-say-ta-man and you can find your like minded bigots.
I feel sad for the mother of deceased child.
However there are questions lingering like 'how the certificate was obtained in the first place?'. We have to vigilant for charactor assasination in this case too.
May 23, 2011 at 10:26 AM Reply
ဒီ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်က ဘာတွေသိလို့ ဘာတွေဝင်ရေးနေတာလဲ.......
May 23, 2011 at 4:32 PM Reply
သို့ . . . ဗမာကိုမုန်းတဲ့ ငကျဉ်း watchman555
Can you point out any meaningful and transparent negotiation from burmese officials? ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ လူမျိုးရေးအမြင်ကျဉ်းနေတဲ့ မင်းတို့ သိက္ခာကို တင်လို့ ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့? ဒီမယ် ဗမာတွေက နအဖကို ဗမာလူမျိုးဆိုပြီး မျက်နှာသာမပေးဘူး။ ဗမာတွေက နအဖကို ဆဲနေတာ မင်းတို့ ကိုယ်တိုင်မြင်ကြတယ်။ ဦးသန်းရွှေကို တရားစွဲဖို့ လုပ်သင့်ကြောင်းပြောကြ.. လှုပ်ရှားကြတယ်။ မင်းတို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ သူတွေ လုပ်သမျှဟာလဲ ဘာတစ်ခုမှ ကောင်းတာမရှိပါဘူးကွာ။ ဘိန်းစိုက် တယ်. . လူသတ်တယ်. . .ဗမာကို လူမျိုးရေးမုန်းတီးတယ်။ မင်းတို့တွေက ဗမာလူမျိုး နအဖကိုပဲ နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောပြီး တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မသိဟန်ဆောင်နေကြတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းဆိုတဲ့ အထာနဲ့ နှာစေးနေ ကြတာပဲ။ ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့ သူတွေက အဲလိုမျိုးလုပ်ကြသလား? အဲဒီစိတ်ဓါတ်က ရိုးသားတာမဟုတ်ပဲ. . . ရွံစရာကောင်းပြီး . . . ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတဲ့ … လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်သာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီးပြောရဦးမယ်။ ဟိုးရှေးပဝေသဏီက ဗမာဘုရင်တွေ ရက်စက်တာကို ပြောပြီး ဗမာတွေအပေါ် မုန်းတီးနေကြတုံးပဲနော်? ပဒေသရာဇ်ခေတ်က လူသတ်တဲ့ခေတ်ပဲ။ အဲဒီခေတ်မှာ မင်းတို့ အဖိုးအဖွားတွေ အသုံးမကျလို့ အသတ်ခံရတာ . . .ဗမာတွေကို အပြစ်မတင်နဲ့။ ညံ့လို့ခံရတာပဲ။ မင်းတို့ အဖိုးအဖွားတွေတော်ရင် . . . ဗမာတွေကို သတ်နိုင်မှာပဲ။ စဉ်းစားတတ်တဲ့သူဆိုရင် ငါတို့ အဖိုးအဖွားတွေဟာ သိပ်ကို ညံ့ပါလားဆိုပြီး . . . မင်းတို့တွေ ရှက်တောင်ရှက်ရဦးမယ်။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီး ၀မ်းနည်းရဦးမယ်။
အခုတော့ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ပဒေသရာဇ်ခေတ်က ကိုယ့်အမျိုး ညံ့တာကို . . . ဒီခေတ်မှာ ဗမာတွေကို ရန်ငြိုးထားနေတယ်။ နအဖနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ မကောင်းတာခြင်းအတူတူ နအဖကိုပဲ အပြစ်တင်နေတယ်။ မင်းသာ ကျောင်းတက်ဖူးရင် လူမျိုးရေး အမြင်ကျဉ်းနေတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ ဘယ်လောက် အထိ နိမ့်ကျလဲဆိုတာ သိမှာပါနော်။
May 23, 2011 at 4:33 PM Reply
May 23, 2011 at 8:26 PM Reply
“ငကျယ်” တစ်ယောက် ရောက်နေပါလား :-)
အသုဘဖိတ်တာကိုတောင် အလွတ်မပေးပဲ လာ“ပွား”တဲ့သူနဲ့ လူမျိုးရေး သွေးလာထိုးသူတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ လောကကြီးမှာ ဘယ်လိုများ ဖြစ်နေပါလိမ့် :-)
ကိုယ့်ကို အတုအပတောင် အလုပ်ခံရလောက်အောင် လူကြိုက်များလာတာမို့ ဘလော့လေးဘာလေး ထောင်ရတော့တာပါပဲ ။
ဘလော့မှာ ဘာမှမရေးသလို ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မဖိတ်ခေါ်ပါဘူး ။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားလားဆိုရင် ၊ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ဖြေပါမယ် ။ hacker တွေအတွက် သတင်းဆိုးကတော့ e-mail password က အလုံး ၅၀ ကျော်ရှိပြီး အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပြူတာ အတည်တကျ မရှိတာပါပဲ ။
သို့ . . . မြန်မာဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ရွှေမန်း
ပထမဆုံးမေးချင်တာက ဘာလို့ ဦးရွှေမန်းနာမည်ကို ယူထားရတာလဲ? မင်းကို ကုလားလို့ လူသိမှာ ဆိုးရိမ်လို့လား? ကုလားဖြစ်ရတာ သိမ်ငယ်စရာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ အေးလေ။ဆက်မပြောတော့ ပါဘူး။ ဒီမိုဘလော့မှာဆိုတော့ နည်းနည်းလေး ထိမ်းထားလိုက် ဦးမယ်။ ဟဲဟဲ။ ဒါနဲ့ မင်းက လောကကြီးကို ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ ထင်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတာကိုတော့ ရယ်ချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။ နေ့စဉ် ဗုံးခွဲပြီး အချင်းချင်းသတ်နေတဲ့ သတင်းတွေ မကြားမိလို့လား? ရှေးကတည်းကစပြီးဒီနေ့အထိ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေကို ဖန်တီးနေတာ။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေကို ဖန်တီးနေတဲ့ ကိစ္စတွေကို မသိလေလို့ လောကကြီးကို ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ပြောနေတာလားကွာ? မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို ယူရင် ဆုချတဲ့ ကိစ္စတွေကို မသိလေသလား? ပြောမယ်ဆိုရင် အများကြီးပါပဲ . . . . ထိမ်းထားလိုက်ဦးမယ်နော်။ ၀ါးဟားဟား
May 25, 2011 at 9:34 PM Reply
May 28, 2011 at 7:50 AM Reply
May 28, 2011 at 1:06 PM Reply
"ပင်လုံစာချုပ်ပြပြီး တိုင်းရင်းသားတွေ ခွဲထွက်ရင် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမယ်" လို့ ပြည်သူတွေကို ခြောက်ပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကို မောင်ပိုင်စီးပြီး စစ်ဗိုလ်ချမ်းသာရေး လမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေကြီး နေဝင်း ရဲ့ နည်းအတိုင်း ပြည်သူ့ငွေတွေကို သွားဖြဲနားဖြဲနဲ့ ဝါးလိုက်၊ ဒီမိုကရေစီရရင် တိုင်းရင်းသားတွေက ပင်လုံစာချုပ်ပြပြီး ခွဲထွက်မှာမို့လို့ ဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်ဖို့ ကယောင်ကတမ်း ထထအော်လိုက်၊ ဗမာ နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို သွေးခွဲပေးလိုက်၊
ရန်တိုက်ပေးလိုက်၊ ခုံလှုပ်လာတော့ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ဘုန်းကြီးပါမရှောင် အသေပစ်သတ်လိုက်၊ ထောင်ဒဏ်နှစ် ၁ဝဝ ကျော်ချလိုက်နဲ့ အဖေကြီး နေဝင်းစကားနဲ့ လုပ်စား၊ လိမ်စား၊ ခိုးစား၊ လုစား၊ သတ်စား လာတာ နှစ် ၂ဝ ကျော်ပီကွ..
May 28, 2011 at 2:00 PM Reply
Serbian ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရက်ကို မာလဗစ် ကို Bosnian မူဆလင်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်မှုနဲ့ နက်သာလန် က The Hague တရားရုံးမှာ တရားစွဲခွင့်ရပြီ ...
သူနဲ.အတူ ပစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဗန်ကာရာဒစ်ခ်ျ ကိုလဲ မိထာပြီးဖြစ်လို. ရာဇ၀တ်ဘေးပြေးမလွတ် ဆိုတာ မှန်လေစွ...
What goes round will come round certainly.
မောင်သန်းရွှေရေ ... ဥပဒေက လိုက်မမှီခင် စေါစေါသေရပါစေ ဆုတောင်းထား ဟေ့။
May 29, 2011 at 2:39 AM Reply
၁၉၆၂မှာမြန်မာပြည်မှခွဲထွက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် စစ်တပ်သည်အဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ငါတို့အဏာရရှိရန် ဖန်တီးခဲ့သူ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် ပင်လုံစာချုပ်ကို ကျေးဇူးတင်သည်။ တရုတ်ကြီး သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ တိုင်းရင်းသား သရဏံဂစ္ဆာမိ။ ပင်လုံစာချုပ် သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
အယုဒ္ဓယမြို့ကို ဖျက်တဲ့ ဗမာတွေကို လက်စားချေခွင့် ရပါစေ လို့ အသတ်မခံရမီ သစ္စာဆိုခဲ့တဲ့ ယိုးဒယားမောင်နှမ says:
၁၉၈၃/၄ လောက်မှာ ထိုင်းဘုရင့်သမိးတော် သီရိဒုံ မြန်မာပြည်လာလည်တယ်။ ဦးနေ၀င်းကိုယ်တိုင် ဧည့်ခံတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ပုံလေး မဂ္ဂဇင်းတွေ ရောက်တာတယ်။ ဟာသလေးပေါ့။
ဦးနေ၀င်းက သီရိဒုံကို မေးတယ်။ "မင်း လူဝင်စား ဆိုတာကို ယုံသလား" ပေါ့။
သီရိဒုံက "ယုံတာပေါ့။ ကျမက ဗမာစစ်သားတွေ အယုဒ္ဓယမြို့ကို သိမ်းတုန်းက ကျမနဲ့ ကျမအကို အသတ်မခံရမှီလေးမှာ သစ္စာဆိုထားခဲ့တယ်။ ငါတို့ နောက်ဘ၀ လူပြန်ဖြစ်ရင် ငါတို့မောင်နှမ ဗမာတွေကို လက်စားချေခွင့်ရပါစေ " ပေါ့။
ဦးနေ၀င်းက "မင်း အခု ဗမာတွေကို လက်စားချေလို့ရပြီလား" လို့မေးတယ်။ သီရိဒုံက "ငါ့အကိုကြိးကို ငါပြန်မဆုံရသေ;ဘူး။" ဦးနေ၀င်းက "မင်းအကိုကြီး မင်းဘေးမှာ ရှိနေတယ်လေ မသိဘူးလား" ပေါ့။ သီရိဒုံက "မသိဘူး" ပေါ့။
ဦးနေ၀င်းက "ငါလေ" လို့ မျက်ခုံးပင့်ပြုံးပြတယ်။ မင်းသမီး သီရိဒုံက "ရှင် ကျမအကို ဆိုတာ သက်သေပြပါ" ပေါ့။
ဦးနေ၀င်းက "မင်း အခု ကြည့်လေ။ အယုဒ္ဓယမြို့ကို သိမ်းတုန်းက အသတ်ခံရတဲ့ မင်းအကိုကြီး လူဝင်စား ဖြစ်တဲ့ ငါက ဗမာတွေကို ဒုက္ခပေးထားတာ။ ဒါတောင် အစဘဲ ရှိသေးတယ်" တဲ့။
ဒီ သီရိဒုံ ရဲ့ အကို လူဝင်စား ဟာသလေးက လူတော်တော်များများက ကြားဖူးပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ "ဒါအစဘဲ ရှိသေးတယ်" လို့ ဦးနေ၀င်းက သီရိဒုံကို ပြောတာကို အပြည့်အဝ နားမလည်ကြသေးဘူး။ မရှင်းကြသေးဘူး။
ဗမာတွေ အယုဒ္ဓယမြို့က ဖမ်းလာခဲ့တဲ့ ယိုးဒယား သုံ့ပန်း(ကျွန်)အဆက်အနွယ် သန်းရွှေ က ဗမာတွေကို လက်စားချေနေတာပါ says:
သီရိဒုံရဲ့ အကို အရင်းခေါက်ခေါက်က အခုမှ ပေါ်လာတယ်။ ယိုးဒယားသွေးစစ်စစ် ယိုးဒယား ရုပ်အပြည့်နဲ့ သန်းရွှေ။ သန်းရွှေက ဗမာတွေ ယိုးဒယားက ဖမ်းလာခဲ့တဲ့ ယိုးဒယား သုံ့ပန်း(ကျွန်) မိသားစုက ဆင်းသက်လာတာ။
အခု ယိုးဒယား သုံ့ပန်း(ကျွန်)အဆက်အနွယ် သန်းရွှေက ဗမာပြည်က ယိုးဒယားကို ဗမာ ကျွန်တွေ ပို့ပေးပြီး ရာဇ၀င်ကြွေး ပြန်ဆပ်နေတာပါ။
ဦးနေ၀င်းက သူ့ထက် လက်စွမ်းထက်တဲ့သူကို အပ်ခဲ့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ "ဒါ အစဘဲ ရှိသေးတယ်" လို့ ဦးနေ၀င်းက သီရိဒုံကို ပြောခဲ့တာကို အခုမှ ရှင်းတော့တယ်။
ယိုးဒယားကို ဗမာတွေနိုင်တော့ ဆင်ဖြူရှင်မင်းကြီး လက်ထက်မှာတင် ယိုးဒယား သုံ့ပန်း ၃၆၀၀၀ လောက် ဖမ်းလာပြီး စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ကျောက်ဆည်ဘက်တွေမှာ ချထားတာ။ သန်းရွှေက ကျောက်ဆည်နယ်က။ ရုပ်ကိုလဲကြည့်။ ယိုးဒယားရုပ်။
အသက်ကြီးကြီး ယိုးဒယားလူမျိုးတွေ၊ ကမ်ပူးချားလူမျိုးတွေ ပုံကို ရှာကြည့်ကြပါ။ ကျုပ်ညွှန်းနေရင် စကားရှည်နေပါဦးမယ်။ အသက်ကြီးကြီး ယိုးဒယားလူမျိုးတွေ၊ ကမ်ပူးချားလူမျိုးတွေ ပြုံးနေတဲ့ ပုံဆိုရင် သန်းရွှေနဲ့ အမွှာလား အောက်မေ့ယူရအောင် တထေရာတည်း။
ယိုးဒယား သုံ့ပန်း(ကျွန်)အဆက်အနွယ် သန်းရွှေက အယုဒ္ဓယမြို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဗမာတွေကို လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ ဒုက္ခပေးထားတာ။
(ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ရေးတဲ့ဆောင်းပါးကို ဒီမိုဝေယံဘလော့မှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်...။)
"သန်းရွှေ မခိုးပါဘူး" ဆိုတာ ကြိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ် ဆိုင်ယာနိုက် သောက်ကြေး ငြင်းရဲလား says:
June 5, 2011 at 5:30 AM Reply
"သန်းရွှေ မခိုးပါဘူး" ဆိုတာ ကြိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ် ဆိုင်ယာနိုက် သောက်ကြေး ငြင်းရဲလား
"ကြံ့ဖွတ်က လူမသတ်ပါဘူး" လို့ ငြင်းရဲလား။ ဆိုင်ယာနိုက် သောက်ကြေး လောင်းမလား။
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၁) says:
June 5, 2011 at 8:30 AM Reply
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၁)
သန်းရွှေသည် မြန်မာလူမျိုး မဟုတ်ကြောင်း၊ ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်ကြောင်းကို သန်းရွှေ၏ ဇနီး ကြိုင်ကြိုင်ဘက်မှ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သူတစ်ဦးမှ ဖော်ထုတ်လိုက်သည်။
- သန်းရွှေ၏ ထိုင်းငယ်နာမည်မှာ "ခွိုင်ဒန်" ( ကျွဲကြီး) ဖြစ်ကြောင်း၊
- သန်းရွှေ၏ မိဘများမှာ ထိုင်းရာမနတ်ကို ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ကြောင်း၊
- သန်းရွှေတို့ ငယ်စဉ်က နစ်စဉ် ပူဇော်ပသမှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း၊
- ထိုင်းရာမနတ်ကွန်းကို မန္တလေးမြို့ တွင် ယနေတိုင် တွေ့နိင်သေးကြောင်း၊
- သန်းရွှေသည် မွန်ပြည်နယ်မှ ဖြစ်ကြောင်း၊
- သန်းရွှေမှာ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ထိုင်းသုံ့ပန်းများမှ ပေါက်ဖွားလာသော ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်ကြောင်း၊
- ထိုထိုင်းသုံ့ပန်းများသည် မြန်မာမင်းများ ယိုးဒယားကို တိုက်ခိုက်စဉ်က ဖမ်းဆီးလာသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊
- အဆိုပါဒေသတွင် ထိုင်းသုံ့ပန်းတို့သည် ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ အသက်မွေးရကြောင်း၊
- ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ်အချို့မှာ လယ်ကျွန်နှင့် ပြည့်တန်ဆာများအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြကြောင်း၊
- ယနေ့တိုင် ထိုထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ်တို့ကို တွေ့နိုင်သေးကြောင်း၊
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၂) says:
June 5, 2011 at 8:40 AM Reply
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၂)
သန်းရွှေတို့ထံမှ အကူအညီ မယူဘဲ နေထိုင်လျက်ရှိသော သန်းရွှေ၏ ဇနီး ကြိုင်ကြိုင်၏ အမျိုး သက်ကြီးအမျိုးသား အဘက သန်းရွှေအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ပြောပြသည်။
- သန်းရွှေသည် လူပျိုပေါက်အရွယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ကျောက်ဆည်နယ်သို့ မိဘများဇာတိကို ဖျောက်၍ လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊
- သန်းရွှေကို မြန်မာလူမျိုးမိသားစုတစ်စုက လက်ခံကာ ကျွေးမွေးခဲ့ကြောင်း၊
- ထိုမိသားစုကို ယနေ့တိုင် သန်းရွှေက စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း၊
- ၄င်းမိသားစုဝင်များသည် ယခုခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထက်ပင် သြဇာအာဏာ ရှိကြောင်း
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၃) says:
June 5, 2011 at 8:44 AM Reply
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၃)
ကြိုင်ကြိုင်၏ ဆွေမျိုး အဘက သန်းရွှေအကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ပြောပြသည်။
- သန်းရွှေသည် ဗိုလ်သင်တန်းတက်ရန် အရွေးချယ်မခံရမီအထိ မိတ္ထီလာစာတိုက်တွင် ရုံးစာရေးလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊
- ဗိုလ်သင်တန်းတက်ရန်အတွက် အသက်ကြီးလွန်းနေသဖြင့် "၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် မွေးသည်" ဟု ၄ - ၅ နှစ်ခန့် အသက်လိမ်ခဲ့ကြောင်း၊
- သန်းရွှေ၏ မွေးနှစ်အမှန်ကို မည်သူမျှ မသိကြောင်း၊
- စစ်ဗိုလ်ဘဝတွင် သန်းရွှေ ဦးဆောင်သော တိုက်ပွဲများ အမြဲလို ရှုံးကြောင်း၊
- ဒီအချက်ကလည်း ထိုင်းဇာတိကို ပြနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊
- ထိုစဉ်အခါက စစ်တပ်တွင် တိုက်ပွဲရှုံးပါက ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူသော စနစ် မရှိသေးဘဲ တိုက်ပွဲ မအောင်သောတပ်ကို ကားစီစဉ်မပေးဘဲ လမ်းလျှောက်ပြန်စေခြင်း ကဲ့သို့ သော ပြစ်ဒဏ်များကိုသာ ပေးလေ့ရှိကြောင်း၊
- သန်းရွှေ ဦးစီးသောတပ်မှာ မကြာခဏ လမ်းလျှောက်ပြန်လာရသောတပ် ဖြစ်ကြောင်း
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၄) says:
June 5, 2011 at 8:55 AM Reply
သန်းရွှေသည် ထိုင်းသုံ့ပန်းအနွယ် ဖြစ်သည် (၄)
ကျောက်ဆည်သားတို့သည် ယဉ်ကျေးကြသည်။ မြန်မာဆန်သည်။
ယနေ့အထိ ရိုးရိုးကြီး၊ တုံးတိကြီး စကားပြောကြသည်။
"မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က" ဟု ပညာရှင်တို့ ခံယူထားသည်။
ယခင်က သန်းရွှေမှာ ကျောက်ဆည်သားဟု အများက သိရှိထားရာ
"အဘယ့်ကြောင့် သန်းရွှေသည် ကျောက်ဆည်သားဖြစ်လျက် ဤမျှလောက် ရိုင်းသနည်း၊
အဘယ့်ကြောင့် သန်းရွှေသည် ကျောက်ဆည်သားဖြစ်လျက် ရဟန်း၊ သံဃာကို သတ်ဖြတ်ဝံ့သနည်း"
ယခင်က အဖြေရှာမရခဲ့သော ဤ မေးခွန်းများသည် အဘ၏ ရှင်းပြချက်ကို နားထောင်ပြီး ရှင်းလင်းသွားပါတော့သည်။
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၁) says:
June 7, 2011 at 7:28 AM Reply
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၁)
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၂) says:
June 7, 2011 at 7:35 AM Reply
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၂)
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၃) says:
June 7, 2011 at 7:40 AM Reply
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၃)
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၄) says:
June 7, 2011 at 7:45 AM Reply
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၄)
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၅) says:
June 7, 2011 at 7:49 AM Reply
သန်းရွှေက KNU ထက် လူပိုသတ်တယ် (၅)
June 7, 2011 at 12:27 PM Reply
လူတိုင်းဟာ အမှားနဲ့မကင်းဘူး ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မင်း ကြားဖူးလား
KNU မှားခဲ့ တာနဲ့နအဖ မှားခဲ့ တာ ဘယ်သူက ပိုများလဲ
အဲဒါ မင်း ကြားဖူးလား
အဲဒါတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ ဖူးတယ်
ဆရာဝန်တွေ ပြီးစလွယ်နဲ့ စတီးရှိုက်တွေ ပေးနေတာ အန္တရာယ်ပါ (၁) says:
June 11, 2011 at 11:13 PM Reply
အခုမြန်မာပြည်မှာ ဆေးခန်း အတော်များများက လူတယောက် သာမန်ဖျားနာရင်ကို STEROIDS / PREDNISOLONE တွေ ပေးတော့တာ။ စတီးရွိုက်ဆေးဆိုတာက သူက ရောဂါကို ကုပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာကို / တနည်း - ဝေဒနာကိုသက်သာအောင် လုပ်ပေးတာ။ ဥပမာထပ်ဆင့်ပေးပါမယ်။ သူက ပဋိဇီဝဆေးလို ရောဂါပိုးကို တိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ဆို (ရွှေရင်အေးဆေး) လူတဦးကို ရောဂါပိုးဂါပိုးဝင်လာရင် (ရန်သူပေါ့) လာရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်က (မြို့ခံတပ်ပေါ့) ပြန်ခုခံတိုက်တယ်။ တနည်း စစ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ စစ်တိုက်ကြ စစ်ဖြစ်ကျတော့ မီးတွေလောင် ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တော့ လူမှာ ကိုက်ခဲ မီးလောင်တော့ ကိုယ်တွေပူ ဖျားတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမြင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ကိုယ်ခံအားကောင်းရင် ရောဂါပိုးကိုနိုင်ပြိး သက်သာလာတယ်။ ကိုယ်ကမနိုင်ရင် ပဋိဇီဝဆေးတွေ အကူယူ တိုက်ရတာက ဆေးကုတာ လုပ်ပေးရပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေ ပြီးစလွယ်နဲ့ စတီးရှိုက်တွေ ပေးနေတာ အန္တရာယ်ပါ (၂) says:
June 11, 2011 at 11:16 PM Reply
လူမမာ အားပြတ်နေပြီ)။ တခါစတီးရွိုက်ကလည်း ဖြတ်လိုက်တော့ အရေးပေါ် ဖြစ်တော့တာဘဲ။ အထက်က စတီးရွီုက်ဆေးက ဖြတ်ရင် တဖြေးဖြေးချင်း လျှော့ဖြတ်ရတာ။ ရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်ရင် အဖျားလဲ ပြန်ပြီး ကန်ထလာတယ်။ လူမမာလည်း အားပြတ်သလို အရုပ်ကြိုးပြတ်ပြီး မလှုပ်ချင် မကိုင်ချင်အောင် ပုံကျသွားတော့တာ။
ဆရာဝန်တွေ ပြီးစလွယ်နဲ့ စတီးရွိုက်ဆေးတွေ ပေးနေတာ သမားကျင့်ဝတ်ကို ဖေါက်ဖျက်တာပါ says:
June 12, 2011 at 1:14 AM Reply
ဆရာဝန်တွေ ပြီးစလွယ်နဲ့ စတီးရွိုက်ဆေးတွေ ပေးနေတာ သမားကျင့်ဝတ်ကို ဖေါက်ဖျက်တာပါ
အခုမြန်မာပြည်မှာ ဆေးခန်း အတော်များများက လူတယောက် သာမန်ဖျားနာရင်ကို STEROIDS / PREDNISOLONE တွေ ပေးတော့တာ။ စတီးရွိုက်ဆေး ဆိုတာက သူက ရောဂါကို ကုပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ရောဂါလက္ခဏာကို / တနည်း - ဝေဒနာကို သက်သာအောင် လုပ်ပေးတာ။ ဥပမာ ထပ်ဆင့်ပေးပါမယ်။ သူက ပဋိဇီဝဆေးလို ရောဂါပိုးကို တိုက်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အရပ်စကားနဲ့ဆို (ရွှေရင်အေးဆေး) လူတဦးကို ရောဂါပိုး ၀င်လာရင် (ရန်သူပေါ့) လာရင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်က (မြို့ခံတပ်ပေါ့) ပြန်ခုခံတိုက်တယ်။ တနည်း စစ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့။ စစ်တိုက်ကြ စစ်ဖြစ်ကြ တော့ မီးတွေလောင် ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တော့ လူမှာ ကိုက်ခဲ မီးလောင်တော့ ကိုယ်တွေပူ ဖျားတယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမြင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်က ကိုယ်ခံအားကောင်းရင် ရောဂါပိုးကိုနိုင်ပြိး သက်သာလာတယ်။ ကိုယ်က မနိုင်ရင် ပဋိဇီဝဆေးတွေ အကူယူ တိုက်ရတာက ဆေးကုတာ လုပ်ပေးရပါတယ်။
အဲဒီမှာ စတီးရွိုက်ဆေးကို ပေးလိုက်ရင် သူက ရန်သူကို မတိုက်ဘူး။ စတီးရွိုက်က မြို့ခံတပ်ကို မတိုက်ဖို့ ရွှေရင်အေးဆေး ပေးလိုက်တာပါ။ စစ်မတိုက်ကြတော့ မီးမလောင်တော့ဘူး အပစ်အခတ်တွေ မရှိတော့ အကိုက်အခဲတွေ ကိုယ်ပူတာတွေ ရပ်သွားတာပါ။ ရောဂါပိုး(ရန်သူ) က သူ့ကို တိုက်သူမရှိတော့ မြို့ထဲကို အေးအေးဆေးဆေး ၀င်ထိုင်တော့ ခြေကုပ်ယူတော့တာပါ။ အဲဒီလို ပုံဖေါ်မြင်ကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့ကို စာသင်ပေးတဲ့ ပါမောက္ခကြီးတွေ ပြင်ပဆေးခန်းက ဆရာဝန်တွေ ပြီးလွယ်နဲ့ စတီးရွိုက်ဆေး တွေ ပေးနေတာကို နည်းနည်း ရိပ်မိကြပါတယ်။ အခု ကျနော် ထောက်ပြသလောက် မသိကြပါဘူး။ သိရင် မျက်လုံးပြူးကုန်ပြီး ထိုင်မနေနိုင်ကြပါဘူး။ အခုဆို မြန်မာပြည်ဆေးဆိုင်တွေကို ခင်ရင်မေးကြည့်ပါ။ ဒီစတီးရွိုက်ဆေးတွေဟာ အင်မတန် ရောင်းအားကောင်းနေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဦးဖေသက်ခင် / ကျနော်က မမတူးခေါ်တဲ့ ဒု-၀န်ကြီး ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် / မမအုံးလို့ ခေါ်တဲ့ ဒေါ်မြမြအုံးခင် (သုံးယောက်စလုံးနဲ့ အတော်လေး ခင်ပါတယ်) တို့ကို ကျနော် ဒုက္ခပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ စစ်တမ်း ကောက်စေချင်ပါတယ်။ စတီးရွိုက်ကို ကွမ်းယာဆိုင်တွေကအစ ပဲကြီးလှော်လို ညွှန်းနေတာလေး စစ်တမ်းကောက်ပေးပါ ကြပ်မတ်ပေးပါလို့။ ဒီဆေးတွေကြောင့် ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ၀လဲပိုဝလာတယ်။ အရပ်ပါ ပုလာပါတယ်။ တခါဖျားလို့ ဆေးခန်းတွေမှာ တခါ ကုလိုက်ရင် တခါ ၀လာတာ အဲဒီဆေးတွေ အကျွေးခံကြရလို့ပါ။
လူမမာ အားပြတ်နေပြီ။ တခါ စတီးရွိုက်ကလည်း ဖြတ်လိုက်တော့ အရေးပေါ် ဖြစ်တော့တာဘဲ။ အထက်က စတီးရွိုက်ဆေးက ဖြတ်ရင် တဖြေးဖြေးချင်း လျှော့ဖြတ်ရတာ။ ရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်ရင် အဖျားလဲ ပြန်ပြီး ကန်ထလာတယ်။ လူမမာလည်း အားပြတ်သလို အရုပ်ကြိုးပြတ်ပြီး မလှုပ်ချင် မကိုင်ချင်အောင် ပုံကျသွားတော့တာ။
တခါက ၂၀၀၅- ခုနှစ်ပေါ့။ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ ကလေး - ၃-နှစ်သားလေး ဖျားတယ်။ ဆေးခန်းပြတယ်။ ငွေသိပ်မတတ်နိုင်တော့ အဖျားကျပြီ ဆိုပြီး ဆေးခန်းဆက် မသွားတော့ စတီးရွိုက် ရုတ်တရက် ပြတ်သွားတယ်။ ကလေးက မျက်လုံးလေးဟောက် မလှုပ်နိုင်တော့ ကလေးဆေးရုံကြီး သွားပြရတယ်။ ဆေးရုံတင်ရတယ်။ ဆေးရုံမှာ အားဆေးတွေသွင်း အားပြန်မထူနိုင်ဘူး။ ကျနော်လိုက်ကြည့်တယ်။ ကလေးကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ချွေးစေးတွေနဲ့ အေးစက်နေတာ။ သိလိုက်ပြီ အပြင်ဆေးခန်းက ဆရာဝန်က ပထမနေ့ကတည်းက စတီးရွိုက်ဆေး နဲ့ကုနေတယ်ဆိုတာ။ ဒါ (လုံးဝ မလုပ်ကောင်းတဲ) ကိစ္စ။ ဒါဆရာဝန်တွေ စောင့်ထိန်းရတဲ့ သမားကျင့်ဝတ်ကို ဖေါက်ဖျက်တာ။ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကလည်း မိတ်ဆွေဆိုတော့ ကျနော် ဒီလိုထင်ပါတယ် ရှင်းပြလိုက်တယ်။ သူက ကျနော်ထက် လေးတန်းလောက်ငယ်တယ်။ သူကလက်ခံတယ်။ စတီးရွိုက်လေး ပေးလိုက်တာ တနာရီနေတော့ ထထိုင်တော့တာဘဲ။ ဒီလိုဘဲ တခြားသူတွေလဲခနခန ဖြစ်တတ်ကြလို့ ကျနော့်ကိုခေါ်ပါတယ်။ သိတယ်။ စတီးရွိုက်ဝယ်သောက် ညွှန်းလိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်တယ်။ မသက်သာရင်ဖုံးဆက်။ ဒီအတိုင်းဘဲ။ နာရီဝက် တနာရီဆို ရေတောင်ပြန်ချိုးလို့။ ပြီးမှ တစတစ ဖြတ်နည်းညွှန်းရတယ်။
အာဏာရှင်ဖက်မှ နာပြီး မှတ်ချက် လာရေးသွားသည့် ရုရှားမှ စစ်ဗိုလ်များကို ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်က တုံ့ပြန်ထားသော မှတ်ချက်များ says:
June 12, 2011 at 7:56 PM Reply
အာဏာရှင်ဖက်မှ နာပြီး မှတ်ချက် လာရေးသွားသည့် ရုရှားမှ စစ်ဗိုလ်များကို ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်က တုံ့ပြန်ထားသော မှတ်ချက်များ
ကျနော်က ကိုယ်ကျွမ်းတာ ဆေးကုတာအပြင် နိုင်ငံအရေးပါ စိတ်ဝင်စားတယ်။ လေ့လာတယ်။ လုပ်တယ်။ နိုင်ငံအရေးက ခင်ဗျားကော ကျနော်ရော လူတိုင်းအရေးပါ။ အခု စစ်တပ်က ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံအရေးကို ၀င်လုပ်ရုံ မကဘူး၊ ကျန်လူတွေကိုကျတော့ "နိုင်ငံအရေး မလုပ်နဲ့" ဆိုပြီး လုပ်နေလို့ ဝင်ပါနေရတာပါ။ "၀န်ထမ်းတွေ နိုင်ငံရေး ကင်းရမယ်" လို့ ဆိုထားပြီး နိုင်ငံရေး ဘာမှ လေ့လာခွင့် ပေးမထားသူ စစ်ဗိုလ် ၂၅% ကို လွှတ်တော်မှာ တင်ထားတာ အပြောနဲ့အလုပ် ညီရဲ့လား ဆိုတာကို ပြောပါအုံး။ သူတို့ ကျတော့ ဘယ်တုံ့းက နိုင်ငံအရေး ကျုပ်တင်ပြနေတာတွေ.. "ဒါတွေ လွဲနေတယ်၊ ဒီလိုဆို ပိုကောင်းမယ်" လို့ရေးခိုင်းပါအုံး။ ပိုကောင်းရင် လက်ခံဖို့ အသင့်ပါ။
"နှုတ်ပိတ်နေ" ဆိုတာက သူခိုးကြီးတွေ ခိုးတာကို ကိုယ်နဲမဆိုင်ဘူး ဆိုပြီး ကြည့်နေရမှာလား။ ဒါဆို အရပ်ထဲ သူခိုး ၀င်ခိုးတယ်။ သူခိုး ခိုးနေတာ နှုတ်ပိတ်နေရမှာလား၊ "သူခိုးပါ" လို့ အော်ရမှာလား။ ပြောပါအုံး။ ကနေ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း ဘယ်သူခေါင်းက ထွက်လာတာလဲ ဆိုတာကို သိချင်ရင် ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို သွားမေးပါ။ ဗိုလ်မှုးဇော်လင်း၊ ဗိုလ်မှုးစိုးဝင်း၊ ဦးနေ၀င်း မိသားစုတွေကို သွားမေးပါ။ မကြာခင် ကမ္ဘာမှာ အကြီးဆုံးစက်မှုဇုံ ဖြစ်လာတော့မဲ့ စီမံကိန်းက ကျုပ် နိုင်ငံအရေး စဉ်းစားလို့ပေါ်လာတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ဘဘကြိးဦးသန်းရွှေကို ကျုပ်ခေါင်းကထွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး လို့ အရင် ငြင်းခိုင်းလိုက်ပါအုံး။ သူတို့ ခေါင်းက ဘာလို့ မထွက်ရတာလဲ။ ကျုပ် နိုင်ငံအရေး မစဉ်းစားပါနဲ့ ဆိုရင် အဲဒီစီမံကိန်းကို အရင်ရပ်အောင်ပြောပါ။ ဒါနိုင်ငံအရေး စဉ်းစားလို့ ရလာတာပါ။
June 12, 2011 at 7:57 PM Reply
ဒေါ်စုနဲ့ ခင်ခဲ့ ပတ်သက်ခဲ့လို့ ထောင်ကျခဲ့ရတာပါ။ ဒေါ်စုရတဲ့ ဆုကြေး (ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်း) ကိုဒေါ်စုက ဆုပေးအပ်စဉ်ကထည်းက အဲဒီ နိုဘယ်ဖေါင်ဒေးရှင်းမှာဘဲ တခါထည်း (TRUST ) အနေနဲ့ (အသေ) အပ်နှံထားပါတယ်။ အဲဒီလို အသေ အပ်ထားတဲ့ ငွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မထုတ်နိုင်တော့ပါ။ အဲဒီ အပ်ထားတဲ့ ငွေကနေ နှစ်စဉ် ရလာတဲ့ အတိုးငွေ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀၀/- (ရှစ်သောင်း) ခန့်ကိုလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပြည်ပပညာရေးမှာ ထောက်ပ့ငွေ/ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းစားခံနေရတဲ့ မြန်မာကလေးမလေးတွေကို ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ ကို ထာဝရ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒေါ်စုရတဲ့ ဆုကြေး (ဒေါ်လာ ၁.၃ သန်း) ကို ဒေါ်စုက သူ့ မိသားစုအတွက် တပြားမှ မသုံးစွဲပါကြောင်း။ ဒေါ်စု ငွေနဲ့ ပြန်လွတ်လာသူတွေ တပုံကြိးပါနော်။ အဲဒီလို ရောင်းစားခံရတာတွေ ဘယ်သူ့ ကြောင့်ပါလဲ။
ဘဘကြိးရွှေ သူ့့မြေးလေးအတွက် ဟယ်လီကော်ပတာ ၀ယ်ပေးသလို ဒေါ်စုလဲ သူ့ အချစ်ဆုံ့း သားလေးအတွက် ဟယ်လီကော်ပတာ ၀ယ်ပေးနိုင်တာပေါ့။ ဒေါ်စုက သူ့ အချစ်ဆုံ့း သားလေးအတွက် မန်ချက်စတာထဲလဲ ရှယ်ယာ ၀ယ်ပေးနိုင်တာပေါ့။ မန်ချက်စတာက ခိုးထားတဲ့ငွေနဲ့ဆို ရှယ်ယာဝယ်လို့ မရဘူးနော်။ အဲဒီလောက်တော့သိကြမှာပါ။
June 12, 2011 at 7:58 PM Reply
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်နဲ့ မခင်ပါ။ သူ့ သား ထွန်းနိုင်ရွှေနဲ့ ကတော့ မယားညီအကိုအရင်းပါ။ ပြောစရာတွေ တပုံကြီး ရှိသေးတယ်။ သူတို့ နဲ့ အမျိုးတော်ရလို့ ဂုဏ်မယူချင်ပါဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားအမျိုးထဲမှာ လူသတ်သူ၊ မတရားခိုးထားသူ၊ ဖါခန်းတွေ (အနှိပ်ခန်း) တွေက လာဘ်ယူထားသူတွေကို ခင်ဗျား အမျိုးတော်ရရင် ဂုဏ်ယူပြနေမှာလား။ မန္တလေးနန်းရှေ့ က ဖါခေါင်းမောင်မောင် စီးတဲ့ ကားပြန်ရောင်းတော့ ဘယ်သူမှ မ၀ယ်ကြပါဘူး။ ဈေးချပေးတာတောင်နော်။ အဲဒါ လူစိတ်ရှိသူတွေရဲ့ သဘာဝပါ။ အော်တော်ပါတယ်။
နေ၀င်းမိသားစုနဲ့ လဲ ခင်ပါတယ်။ ဒေါ်စန္ဒာဝင်း၊ ဖြိုးေ၀၀င်း၊ အေးဇော်ဝင်း၊ အေးနေ၀င်းတို့ ကိုမေးပါ။ ဘာမှ ဂုဏ်ယူစရာ မရှိသူတွေပါ။ "ကိုယ့်အရေးသာ လုပ်ကြ" ဆိုတာ.... နိုင်ငံအရေးလုပ်နေသူ ပါးစပ်က ထွက်ရဲတာ အံ့ .. အံ့လွန်းပါတယ်။ အဲဒါ သန်းရွှေ လူထုနဲ့ ကြ့ ဖွတ်တွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ပြောနေကျ စကားနဲ့ တထေရာထဲပါ။ ရှိသေးတယ်။ ဇေယျာသော်တို့ ကိုစစ်တုံးက ထောက်လှမ်းရေးက "နိုင်ငံရေးကလွဲရင် ကြိုက်တာလုပ်ပါ တဲ့။ သူတို့ ကူညီမယ် တဲ့။ နံပါတ် ဖိုး (ဘိန်းဖြူ) ရောင်းမလား။ ပင်ရင်းနဲ့ပါ ချိတ်ပေးထားပါမယ်" တဲ့ ။ တခြားနိုင်ငံရေးသမားတချို့ ကိုလဲ အဲဒီလိုအထိ ပြောပါကြောင်း...
အမေရိကန်သမတကြီး ဂျွန် အက်ဖ် ကနေဒီရဲ့ သမတကျမ်းသစ္စာကြိမ်ဆိုပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်မိန့် ခွန်းကိုကြည့်ပါ။ "ASK NOT, WHAT THE COUNTRY CAN DO FOR YOU. ASK WHAT YOU CAN DO FOR THE COUNTRY, FOR AMERICA TO LEAD THE WORLD." ကနေ့ တိုင်းပြည်ကို ၂၃ နှစ် အုပ်ချုပ်သွားခဲ့သူကြီးက မှတ်သားလောက်ဖွယ် ပြောခဲ့တဲ့ မိန့် ခွန်းလေး ရှိရင် မျှပါအုံး။
June 12, 2011 at 7:59 PM Reply
ဒေါ်စုကို ဂုဏ်ပြုတာ အပေါ် တော်တော် အစာမကျေနေပုံတော့ ရတယ်။ ဒေါ်စု ရတဲ့ ဒေါ်လာက ခိုးလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ လက်ထဲက ခိုးယူပေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဃာတ မထားပါနဲ့ ။ ကျနော်ပြောနေတာတွေက ကျနော်တို့ မြန်မာတွေပိုင်တဲ့ ဓနတွေကို ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဥပဒေ လက်တလုံးခြား လုပ် သဲ့ယူထားခံရတာတွေကို ထောက်ပြနေတာပါ။ "ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခိုးထားတာတွေကို ပြန် မစစ်ဆေးကြရကြေး" ဆိုရင် ဘာလို့ သာမန်ရိုးရိုး သူခိုးတွေ ဓါးပြတွေကို ဖမ်းပြိး ပစ္စည်းကို ပြန်သိမ်းနေစရာ လိုသေးလဲ။ ဘယ်သူ ခိုးခိုး ဖမ်းရမှာက ဥပဒေလေ။
ဒီနေ့ ခင်ဗျားတို့ ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုတွေ ကျုပ်ရှေ့ မှာ စိန်နားကပ် ၀တ်ရဲလို့ လား။ "ဒီ စိန်နားကပ်က ဘယ်လောက်လောက် တန်နိုင်တယ်" လို့ ကျုပ် တခွန်း ပြောလိုက်တာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုတွေ ဒေါသတွေ အလိပ်လိုက် ထွက်လာပြီး ကျုပ်ကို ပြန်ပြောဝံ့ကြပါ့မလား။ ကျုပ်ယောက်ဖ၀မ်းကွဲ မိသားစုတွေကို ကျုပ် ဖဲ့လာခဲ့တာ များပြီ။ ကားတောင် သူများနံမည်တွေနဲ့ ထားကြရတာပါ။
နောက်တခု ..... ဒေါ်စုက စိန်နားကပ် ၀တ်ပြစရာ မလိုဘူး။ လူတွေက သူ့ မိန့် ခွန်းကို လိုချင်နေတာ။ စိန်တွေ တထောကြိး ရှိတဲ့ အမေကြိုင် မိန့် ခွန်းလေးများ မျှပါအုံးဗျာ။ ရှိရင်ပေါ့။ နောင်လာနောက်သားတွေ နမူနာပြရအောင်ပါ။ ဒေါ်စုချမ်းသာတာ မင်းမသိဘူးနော်။ သိအောင်စဉ်းစားလိုက်ပါအုံး။
"တန်ချွေ" (သန်းရွှေ) ၏ ပထွေးသည် မွတ်ဆလင်ကုလား ဖြစ်ပြီး သန်းရွှေ၏ အမေလည်း မွတ်ဆလင်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြောင်း ထိုင်းဝီကီပီဒီယာ မှာ ဖော်ပြချက် says:
August 19, 2012 at 4:29 AM Reply
"တန်ချွေ" (သန်းရွှေ) ၏ ပထွေးသည် မွတ်ဆလင်ကုလား ဖြစ်ပြီး သန်းရွှေ၏ အမေလည်း မွတ်ဆလင်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြောင်း ထိုင်းဝီကီပီဒီယာ မှာ ဖော်ပြချက်
(ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ထိုင်း Wikipedia မှာ ကုလားလေး "တန်ချွေ" (သန်းရွှေ) အကြောင်းကို ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးထားတာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။)
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်လိုပဲ မသိဖူးတဲ့သူတွေကို ရှယ်ချင်စိတ် ပေါ်လာပြန်တယ်။ မှန်၊ မမှန်ကတော့ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ပဲ သိမှာပါနော်။
ဒီအကြာင်းကို ရေးချင်၊ မရေးချင် ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ ကိုယ်တွေပဲ မသိတာ။ တိုင်းတစ်ပါးသားတောင် သိကုန်နေပြီ။ မြန်မာပြည်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ ထိုင်းအသိကနေ ဖွင့်ပြမှ သူတို့ရေးထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ အကြောင်းကို ဖတ်ရတယ်။ ထိုင်းတွေက "သ" နဲ့ "ရှ" အသံ မထွက်တတ်တော့ သန်းရွှေကို "တန်ချွေ" လို့ ခေါ်ကြတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့ ဆင်းရဲသော လယ်ယာလုပ် မိဘများမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အသက် ဆယ်နှစ်အရွယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် မိခင်ဖြစ်သူက မွတ်ဆလင်ကုလားတစ်ဦးနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူသည် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဖြစ်ရလေသည်။
ဖတဆိုးသန်းရွှေသည် ကလေးကပင် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်ခဲ့ရလေသည်။ သန်းရွှေသည် အသားမဲ၍ ကုလားရုပ် ပေါက်နေသည့်အပြင် သန်းရွှေ၏ မိခင်က မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဖြစ်သောအခါ "ကုလားလေး" ဟူ၍ လှောင်ပြောင်ခြင်း ခံရလေ့ရှိသည်။
သန်းရွှေသည် ငယ်စဉ်က အေးအေးရှင်းရှင်း နေလေ့ရှိပြီး မည်သူနှင့်မျှ အပေါင်းအဖော်ပြုလေ့မရှိ။ စကားနည်းသော်လည်း ပြောသည့်အတိုင်း လုပ်တတ်သည်။ စည်းကမ်းရှိ၍ စာတော်သည်။ သို့သော်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောကြောင့် ကျောင်းထွက်ခံရပြီး မိသားစုကို လုပ်ကျွေးရလေသည်။ အထက်တန်းကျောင်းပညာကို ၁၈ နှစ်အရွယ်မှ (1951) အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ထိုင်း ၀ီကီလင့်ခ် --- http://th.wikipedia.org/wiki/Than_Shwe
(ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ သိဖူးလောက်မယ် ထင်တယ်။ စာတိုက်စာရေးကနေ ရန်ကုန် ဆင်းပြီး စစ်ထဲ ၀င်ဖြစ်သွားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။) ဒါမှမဟုတ် google ကနေ ကော်ပီကူးပြီး ဘာသာပြန်ပေါ့နော်။
ကျနော် စိတ်ဝင်စားတာက သူ့မိသားစု အကြောင်းပါ။ တန်ချွေ (သန်းရွှေ) ရဲ့ မိခင်က မွတ်ဆလင်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတော့ အမေတူ အဖေကွဲ မောင်နှမတွေ ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာပါ။ ထိုင်းဝီကီမှာ မဖော်ပြထားတော့ မသိရဘူး။
သိသူများ ဖော်ပြပေးကြပါဦး။ သူက ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ယူထားပြီးမှ သူ့အကြောင်းကိုလည်း ကျနော်တို့ သိခွင့်ရှိတာပေါ့နော်။
သာသနာဖျက်သန်းရွှေက မွတ်ဆလင်ကုလား ပထွေးရဲ့ ကျွေးမွေးသွန်သင်မှုနဲ့ ကြီးလာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို မိုက်ရိုင်းစော်ကားရဲတာပေါ့ says:
August 19, 2012 at 5:02 AM Reply
လူသတ်ကောင်သန်းရွှေက ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ရွှေဝါရောင် သံဃာ့အရေးတော်ပုံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခိုင်းတာ၊ တုတ်နဲ့ ရိုက်သတ်ခိုင်းတာ၊ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ပြီး ဖမ်းခိုင်းတာ ဘာ ထူးဆန်းမှာလဲ..
သာသနာဖျက်သန်းရွှေက မွတ်ဆလင်ကုလား ပထွေးရဲ့ ကျွေးမွေးသွန်သင်မှုနဲ့ မွတ်ဆလင်ကုလား အိမ်မှာ ကြီးလာတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဒီလို မိုက်ရိုင်းစော်ကားရဲတာပေါ့..
(( သန်းရွှေကို မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့ ဆင်းရဲသော လယ်ယာလုပ် မိဘများမှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အသက် ဆယ်နှစ်အရွယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူ သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် မိခင်ဖြစ်သူက မွတ်ဆလင်ကုလားတစ်ဦးနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူသည် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဖြစ်ရလေသည်။
ဖတဆိုးသန်းရွှေသည် ကလေးအရွယ်ကပင် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်ခဲ့ရလေသည်။ သန်းရွှေသည် အသားမဲ၍ ကုလားရုပ် ပေါက်နေသည့်အပြင် သန်းရွှေ၏ မိခင်က မွတ်ဆလင်တစ်ဦးနှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီး မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ဖြစ်လာသောအခါ "ကုလားလေး" ဟူ၍ လှောင်ပြောင်ခြင်း ခံရလေ့ရှိသည်။
တာဝန်ရှိသူများ သိလျက်နှင့် အရေးမယူသဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှ အေးဓားပြများ ဆက်လက် ငွေညှစ်နေခြင်း says:
January 13, 2014 at 9:12 AM Reply
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အားလုံးကို ကြောက်ရသည်။ ဆေးရုံကြီးကို နောက်တစ်ခါ မသွားရဲတော့ပါ။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး လူနာဆောင် ၅ / ၆ တွင် ပိုက်ဆံ အပေးရ အနည်းဆုံးနေရာမှာ အိမ်သာတက်ခပင် ဖြစ်သည်ဟု လူနာစောင့်တို့က ပြောကြသည်။ အိမ်သာသို့ တစ်ခေါက် သွားလျှင် ပိုက်ဆံ ၂၀ ပေးရသည်။ အိမ်သာစောင့် အမျိုးသမီးသည် အကြွေများကို ပုံမှန် ပြန်အမ်းလေ့ရှိသည်။ ၁၀၀ ပေးပြီး ငါးခေါက်စာဟု မှတ်ထား၍ မရ။ တစ်ခေါက် သွားတိုင်း ၂၀ သာ ပေးရသည်။
ပိုက်ဆံ အပေးရ အများဆုံးနေရာမှာ ခွဲစိတ်ခန်းတွင် ဖြစ်သည်ဟု ကြုံဖူးသူတို့က ပြောကြသည်။ ခွဲစိတ်ခန်းတွင် သန့်ရှင်းရေးနှင့် လှည်းတွန်းသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပေးသည့် ကုလားအဖွဲ့ကို ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့လူများကိုဆိုလျှင် သုံးသောင်း၊ နှစ်သောင်း စသည့်ဖြင့် တောင်းသည်ဟု ခွဲစိတ်ခန်း ၀င်ခဲ့သည့် လူများက ပြန်ပြောပြကြသည်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခွဲစိတ်ခန်းက ထွက်တော့ ငါးထောင် ပေးလိုက်ရသည်။
ပုံမှန်ပေးနေသည့် နေရာများကတော့ လူနာလှည်း တွန်းသည့် ကုလားများ ဖြစ်သည်။ လူနာလှည်း တစ်ခါတွန်း တစ်ထောင် ပေးရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထိုလှည်းတွန်းသူက အကူတစ်ယောက် ခေါ်ပြီး ထိုအကူအတွက်ပါ ပိုက်ဆံပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးထဲ့ရန်အတွက် လူနာလှည်းကို တစ်ခါ လိုက်စီးလျှင် ပေ ၂၀ လောက်ကို ၂၀၀၀ ကျပ် လောက် ကုန်တတ်သည်။ မပေးလျှင်ရော မရဘူးလား။ မရပါ။ အတင်း တောင်းသည်။
ပိုက်ဆံ မပေးတတ်သည့် လူနာဆိုလျှင် မှတ်ထားတတ်ပြီး နောက်တစ်ခါဆိုလျှင် မသယ်ပေးတော့။ ထိုလူနာကို သယ်လာရန် ဆရာဝန်နှင့် နာပ်စ်မက လွှတ်သော်လည်း ကုလားကတော့ လာ မသယ်ပေးပါ။ မဖြစ်မနေ အတင်း သယ်ခိုင်း၍ သယ်ရလျှင်လည်း ဒဏ်ရာများကို မညှာမတာ အရမ်းကာရော လုပ်လေ့ရှိပြီး လူနာကို တမင် နာကျင်အောင် လုပ်လေ့ရှိသည်။
ထို့ပြင် ဆေးရုံတွင် သဲအိတ်ဖိုးလည်း တောင်းတတ်သည်။ လက်သီးတစ်ဆုတ်စာရှိသော သဲအိတ်လေး တစ်ခုကို တစ်ထောင်ပေးရသည်။ ထိုသဲအိတ်ကို ခြေကျိုးသော လူနာ ခြေထောက်နေရာမရွှေ့စေရန် ခံထားပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသဲအိတ်ကို မလိုအပ်လည်း ရောင်းသည်။ လိုအပ်လည်း ရောင်းသည်။ လူနာ တစ်နေရာရာကို သွားလျှင် ထိုသဲအိတ်ကို ကုလားက ဖွက်ထားလိုက်တော့သည်။ လူနာ ကုတင်သို့ ပြန်လာလျှင် ပြန်ဝယ်ရသည်။
လူနာတစ်ယောက်သည် တစ်ရက်တွင် ဓါတ်မှန်ရိုက်ရမည်၊ ဆေးထဲ့ရမည် ဆိုပါက လှည်းတွန်းခ ငါးထောင်လောက် ကုန်တတ်သည်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရန်အတွက် လှည်းတွန်းရာတွင် ၂၀၀၀ ကုန်သည်။ ဆေးထဲ့ရန်အတွက် ၂၀၀၀ ကုန်သည်။ ဆေးထဲ့သည့်နေရာတွင် ဆေးထဲ့ပေးသည့် ကွန်ပေါင်ဒါကို ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ လောက်ပေးရသည်။ ဆေးထဲ့ပေးသူကို ပိုက်ဆံမပေးပါက အနာကို နာကျင်အောင်လုပ်တတ်သည်။ ထို့ပြင် ဓါတ်မှန်ရိုက်သည့်နေရာတွင်လည်း ဓါတ်မှန်ကောင်းကောင်းရရန် ပိုက်ဆံပေးရသေးသည်။ ညနေ ဓါတ်မှန် သွားရွေးသည့် အခါတွင်လည်း အမြန်ရရန်အတွက် ဓါတ်မှန် ထုတ်ပေးသည့် ကုလားကို ပိုက်ဆံပေးရသေးသည်။
လူနာကို သတင်းမေးရန်အတွက် လာကြကုန်သော ဧည့်သည်များကို ဆေးရုံကြီးအပေါက်ဝတွင် တစ်ကြိမ် ပိုက်ဆံတောင်းသည်။ မသိက ၅၀၀ ၊ ၁၀၀၀ ပေးရသည်။ အထာသိပါက ပေးစရာမလို။ နောက် အဆောင်သို့ ၀င်ရန်အတွက် အဆောင်ဝတွင် စောင့်နေသော ကုလားကို ပိုက်ဆံပေးရသည်။ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ပင်။
ဆေးရုံကြီးတွင် မည်သည့် ကိစ္စလုပ်လုပ် ပိုက်ဆံပေးရသည်။ ပိုက်ဆံ မပေးရသည့်အချိန်ကတော့ အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ ဆေးထိုးပေးသည့် အချိန်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အလုပ်သင်ဆရာဝန်အချို့က လူနာများကို စိတ်မရှည်ကြ။ ဟောက်စား လုပ်တတ်သေးသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အားလုံးကို ကြောက်ရသည်။ ဆေးရုံကြီးကို နောက်တစ်ခါ မသွားရဲတော့ပါ။.....................
October 9, 2015 at 4:13 PM Reply